China Resin yekuchera gomba Microvia Kunyudza sirivheri HDI ine Laser kuchera vagadziri uye vanotengesa | Kangna
Resin plugging gomba Microvia Kunyudza sirivheri HDI ine laser kuchera
Min trace upamhi / nzvimbo: 4 mil
Min mugomba saizi: 0.10mm
Apedza bhodhi ukobvu: 1.60mm
Solder mask ruvara: bhuruu
Lead nguva: mazuva 15
Kubva muzana ramakore rechimakumi maviri kusvika pakutanga kwezana ramakumi maviri nemasere, dunhu redare remagetsi indasitiri iri kutora nguva yekuvandudza yehunyanzvi, tekinoroji yemagetsi yakagadziridzwa nekukurumidza. Seyakadhindwa wedunhu bhodhi indasitiri, chete neyakaenderana kukura kwayo, inogona kugara ichisangana nezvinodiwa zvevatengi. Nediki, rakareruka uye rakatetepa vhoriyamu yemagetsi zvigadzirwa, rakadhindwa redunhu bhodhi rakagadzira inoshanduka bhodhi, yakaoma yakaoma inoshanduka bhodhi, bofu yakavigwa gomba redunhu bhodhi zvichingodaro.
Kutaura nezve makomba akapofomadzwa / akavigwa, isu tinotanga neyechinyakare multilayer. Iyo yakajairwa mizhinji-yakatenderera wedunhu bhodhi dhizaini inoumbwa neyemukati wedunhu neyekunze wedunhu, uye maitiro ekuboora uye simbi mugomba anoshandiswa kuzadzisa mashandiro emukati kubatana kwenzvimbo imwe neimwe yedunhu redunhu. Nekudaro, nekuda kwekuwedzera kwekuwanda kwemitsetse, iyo yekuisa nzira yezvikamu inogara ichigadziriswa. Kuitira kuti dunhu redunhu nzvimbo riite shoma uye kubvumidza kuwanda uye kwakakwira mashandiro zvikamu, kuwedzera kune yakatetepa mutsetse upamhi, aperture yaderedzwa kubva 1 mm yeDIP jack kuzarura kusvika 0.6 mm yeSMD, uye kuwedzera kuderedzwa kusvika pasi pe 0.4mm. Nekudaro, pamusoro penzvimbo icharamba ichigarwa, saka yakavigwa gomba uye bofu gomba rinogona kugadzirwa. Tsananguro yegomba rakavigwa uye gomba bofu ndeinotevera:
Buri repakati nepakati pezvikamu zvemukati, mushure mekutsikirira, hazvioneke, saka hazvidi kutora nzvimbo yekunze, mativi ekumusoro uye ezasi egomba ari munzvimbo yepakati yebhodhi, nemamwe mazwi, yakavigwa mukati bhodhi
Iyo inoshandiswa kune kubatana pakati pechiso chepasi uye imwe kana kupfuura emukati matete. Rumwe rutivi rwegomba ruri kune rumwe rutivi rwebhodhi, uye ipapo gomba racho rakabatanidzwa mukati mebhodhi.
Kubatsira kwevakapofomadzwa uye vakaviga gomba bhodhi:
Mune isiri-perforating gomba tekinoroji, kushandiswa kwegomba rakapofumadza uye gomba rakavigwa kunogona kudzora zvakanyanya saizi yePBB, kuderedza huwandu hwematanho, kugadzirisa kusangana kwemagetsi, kuwedzera hunhu hwezvigadzirwa zvemagetsi, kudzikisa mutengo, uye zvakare kugadzira dhizaini. shanda zvakapusa uye nekukurumidza. Mune yechinyakare pcb dhizaini nekugadzirisa, kuburikidza-gomba kunogona kukonzera matambudziko mazhinji. Chekutanga, ivo vanotora yakawanda yakawanda inoshanda nzvimbo. Kechipiri, huwandu hukuru hwepakati-maburi munzvimbo ine gobvu zvakare hunokonzeresa zvipingamupinyi zvakakura kune wiring yemukati wedenga rePCI yakawanda. Aya ma-pit-hole anotora nzvimbo inodiwa kune wiring, uye ivo vanopfuura nepakati penzvimbo yemagetsi uye yepasi waya waya, iyo inoparadza iyo impedance hunhu hwesimba rekupa pasi waya waya uye kukonzera kutadza kwesimba rekupa pasi waya waya rukoko. Uye yakajairika mehendi yekuchera ichave kakapetwa makumi maviri sekushandisa kweiyo isiri-yekupaza gomba tekinoroji.
Pashure: 6 dura impedance kudzora yakaoma-flex board ine stiffener
Zvadaro: 3 oz solder mask plugging ENEPIG inorema mhangura bhodhi